🥇 ▷ Redmi Note 8: Kaamirada horay ayaa loo muujiyay kumbuyuutarraduna waa rasmi! ✅
Redmi Note 8: Kaamirada horay ayaa loo muujiyay kumbuyuutarraduna waa rasmi!
Redmi Note 8 ayaa la imaan doonta isbeddelo waa weyn markii loo barbar dhigo kuwii ka horreeyay, Redmi Note 7. Isbedelka ugu weyn ee muuqaalka jirku wuxuu noqon doonaa kamaradaha gadaal ee hadda afar yihiin. Taasi waa, laba jeer Redmi Note 7. Hadda xisaabta rasmiga ah ee Redmi ee Twitter-ka waxay daaha ka qaaday qaabeynta kaamirada ee Redmi Note 8
Redmi note 8: kamarad hore ayaa loo soo shaaciyey oo wax lala yaabo ayaa ah!
Redmi Note 8 wuxuu la imaan doonaa camera weyn oo 48 megapixel ah. Waxay ku biirtay xagal kale oo ballaaran. Waxa kale oo jira kamarad qoto dheer iyo macro kale oo super. Taasi waa, in si toos ah loo gaaro barta, kamaradda afraad maahan aaladda ToF.
Redmi Note 8 sidoo kale waxay lahaan doontaa naqshad kaamirooyin ka duwan kan Redmi Note 8 Pro, sida lagu arkay sawirka kore. Kaamirooyinka Quad waxaa lagu habeeyay dhinaca bidix ee taleefanka gacanta mana ahan dhexda, sida ku dhacda nooca Pro. Muuqaalka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in casriga casriga ah laga heli doono midab kala duwan oo midab cad oo buluug ah. Waxa kale oo dhabarka ku yaal sawir akhriste faraha. Si kastaba ha noqotee, tani kama muuqato sawirka kore.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal war oo dheeri ah oo hore u rasmi ah.
Redmi waxay horey u xaqiijisay in Note 8 Pro uu la imaan doono qalab MediaTek’s Helio G90T processor. Si kastaba ha noqotee, Redmi Note 8 ayaa la imaan doonta processor kale.
Koontada Redmi ee Weibo ayaa ku dhawaaqday in Redmi Note 8 ay ka shaqeyn doonaan processor-ka Snapdragon 665. Kani waa isla isla processor-ga gudaha Xiaomi CC9e iyo Xiaomi Mi A3.
11-kii chipset-ka nm ayaa la shaaciyey bishii Abriil iyadoo Xiaomi CC9e ay ahayd taleefankii ugu horreeyay ee la yimaada processor-kaan.
Maamulaha guud ee Redmi Lu Weibing ayaa sharaxay sababta ay u doorteen Snapdragon 665.
Maya Weibo ayaa shaaca ka qaaday in “Snapdragon 665” ay tahay 11 nm chipset ka yar kan loo yaqaan ‘Snapdragon 660’ oo ah processor-ka 14 nm ah. Tani waxay u tarjumaysaa kororka waxtarka tamarta. Waxa kale oo ay xustay in Snapdragon 665 ay sidoo kale taageersan tahay Vulkan 1.1 API, taas oo hoos u dhigaysa adeegsiga awooda 20% marka la barbar dhigo Open GL ES.
Snapdragon 665 sidoo kale waxay leedahay matoor AI ka fiican – jiilka saddexaad ee Hexagon 686 DSP ee ka soo horjeeda Hexagon 680 DSP ee Snapdragon 660. Hexagon Vector Extension (HVX) ayaa sidoo kale soo if baxaya.
Si kastaba ha noqotee, Weibing wuxuu raaciyay isagoo ku saleysan tijaabadiisa, taleefankan casriga ah wuxuu qaadaa sawirro wanaagsan wuxuuna leeyahay nolol batari ka fiican marka loo eego Redmi. Xusuusin 7